China Natural katsi marara Kugadzira uye Fekitori | Bondhot
Iko kunakirwa kweTofu katsi marara pamusoro pemamwe marudzi emarara ari
● Yakachengeteka-inogadzirwa kubva kune zvakasikwa zvigadzirwa zvinoita kuti zvikuvadze kana ichidyiwa nezvipfuyo.
● Nyoro Kubata-Yakagadzirwa kubva kune yakasaririra bhinzi curd masara uye chibage starch ine Ultra-nyoro magadzirirwo ayo anogarisa feline nemainzwa paws.
● Guruva Mahara-Inobatsira kuchengetedza peturu mweya wekufema nezvikamu zvayo zveguruva.
● Super Absorbency uye Deodorization- Inokurumidza kunyudza mukaka weti uye inokanganisa hwema hwakasimba pakubata.
● Kurasa Nyore- Bundu racho rinokwira zvikuru uye rinogona kuora uye rinokwanisa kuraswa muchimbuzi kana mubindu sefetereza.
● Easy scooping- Inoita isina-tambo yakasimba clumps iyo iri nyore kubvisa.
● Yakatipoteredza - inounza munhuwi wakanaka kunyangwe weti yekatsi uye inosiya nzvimbo inochengetedza eco.
● Zvishoma track, chengeta pamba yakachena
chikafu-giredhi tofu katsi marara inogadzirwa kubva kune yakasikwa soya uye inogadzirwa nekushandisa inotungamira-kumucheto uye nekukurumidza-kuomesa tekinoroji, inochengetedza zvakatipoteredza, haina makemikari ekuwedzera, uye inodzivirira kutenderera kwematumbu kana katsi yako ichimedza.
Anti-yekutevera hunhu inoita kuti ive nyore kuchenesa! Tofu katsi marara anoumbwa nemidziyo-inotorwa nezvimedu zvisina-tsvimbo uye yakakosha fomati yekusimbisa iyo inobatsira kugadzira zvidiki uye zvakaomarara clumps nokudaro zvichiita kuti zvive nyore kutora. Varidzi veKatsi vanozoonawo mashoma ekutevera uye Katsi dzinonakidzwa neyakaomesesa-yakapfava magadzirirwo ayo anonyanya kugadzikana pamakumbo avo akaomarara.
Iyo ndeimwe yeanonyanya kufarira matati emakati nekuda kwenzvimbo dzayo dzakapoteredzwa nharaunda dzakadai sedzinogadziriswa mbesa bhinzi curd & chibage. Yakasanganiswa nemidziyo yemidziyo uye inonhuwa yobva yaumbwa kuva jecha recolarar. Kusiyana neClay kana Silica litter, Tofu katsi marara ari 100% biodegradable zvinoreva kuti zvakachengeteka kufashaira muchimbuzi kana kushandiswa sefetiraiza yemumunda.
Iwe nekatsi yako mune mukana wekufema guruva kubva kumatope evhu, uye chii chakaipisisa? Katsi yako irikuidyawo pavanosuka paws yavo uye nekugovana kutsvoda newe! Kusiyana neClay kana Silica litter, Tofu katsi marara anogadzirwa ne100% ezvisikwa bhinzi tsvina (iyo-zvigadzirwa-zvetofu). Haisi chete Yemahara Yemahara, asi zvakare inouya neisingakundike hwema Kudzora. Inopinza weti uye inoomesa tsvina yakasimba ye5x yekunhuhwirira zvirinani pane kuunganidza marara evhu.
Pashure: Cat tsvina
Zvadaro: tofu katsi marara